Big City Small World (Series3Episode 11 - Time Is Money) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 17, 2013 at 11:09 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode 11 - Time Is Money (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၁၁) အချိန်ဟာငွေပဲ)
ဟယ်ရီက အရေးတကြီးမေးစရာရှိနေတုန်း စီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့ဂျော်နီဟာ အမြဲတမ်းအလုပ်များလျက်ရှိသည်။ ဘာများပါလိမ့်။
Series3Episode 11 - Time Is Money ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးဂျော်နီ။ မင်းကောနေကောင်းလား။
ကောင်းတယ်ဒါပေမယ့်ခါတိုင်းလိုပဲ အလုပ်များများနေတာပဲ။ အချိန်ကငွေပဲလေ သိတယ်မဟုတ်လား။
အိုး ဟုတ်တယ်။ သိတယ်သိတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဆိုတာ မမေ့နဲ့လေ။
ဘယ်လိုမေ့ရမှာလဲ။ ငါက မင်းရဲ့အဓိကရှယ်ရာရှင်တစ်ယောက်လေ။
ဘင်ယုကဟယ်ရီကိုသူ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ဖို့ မနေ့ညကခေါ်သွားတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့။ သူတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။
သူဘာဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားရမှာလဲ။ ဟယ်ရီက လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။
အင်း သူပြောတော့ သူ့မိဘတွေက တော်တော်လေးရှေးရိုးဆန်တယ်တဲ့။ ခေတ်ဟောင်းသမားတွေပေါ့။ ဘင်ယု ရည်းစားထားတာကို သူတို့ကသဘောတူချင်မှတူမှာ။
ဟယ်လို နင်တို့နှစ်ယောက် . . . ဆိုတော့ . . .?
လုပ်စမ်းပါ။ ငါတို့ကိုအကုန်ပြောပြပါဦး။ ဘယ်လိုအခြေအနေလဲ။
အိုး အကုန်လုံးသိနေကြပြီပေါ့ ဟုတ်လား။
ကဲ တကယ်သိစရာသိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ ဘင်ယုမိသားစုဝင်အားလုံးက ချစ်ဖို့ ကောင်းကြပါတယ်။ အရမ်းလည်းဖော်ရွေတယ်။ ငါ့ကိုလည်း ကြိုဆိုကြတယ်။
အေး အကုန်လုံးအဆင်ချောပါတယ်။ သူတို့ဟယ်ရီ့ကိုသဘောကျပါတယ်။ ငါ့အတွက်လဲကျေနပ်နေကြတယ်။
တွေ့လား။ ငါပြောသားပဲ ပြဿနာမရှိပါဘူးဆို။
ထင်ရတာပဲ။ ငါ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမလို့စဉ်းစားနေတာ။
ဟုတ်တယ်။ ငါ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ သူ့ကိုခွင့်တောင်းချင်တယ် . . .